विरामीको आँखामा २० भन्दा बढी किरा ! « Janata Samachar
विरामीको आँखामा २० भन्दा बढी किरा !
एजेन्सी । चीनमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एकजना ६० वर्षीय विरामीको आँखाबाट डाक्टरहरुले किराहरुको गुँड नै फेला पारेका छन् । ती सबै किरा जीवितै थिए । डाक्टरहरुले आँखाको नानीभित्रबाट २० भन्दा बढी किरा जीवितै निकालेका हुन् ।
केही महिनादेखि आँखामा अनौठो हरकत महसुस भएपछि ती व्यक्ति डाक्टरको परामर्श लिन गएका थिए । डाक्टरहरुले उनको आँखाको सर्जरी गर्ने क्रममा यत धेरै किरा आँखाको नानीभित्र फेला पारेका हुन् ।
विरामीलाई थकाइ लाग्थ्यो
चीनका सञ्चार माध्यमहरुले बताए अनुसार ती जिउँदा किराहरु विरामीको आँखामा झण्डै एक वर्षदेखि रहेको थियो । विरामीलाई आँखामा अनौठो गतिविधि भैरहेको अनुभूति हुन्थ्यो । तर थकानका कारण यस्तो भएको होला भन्ने सोचेर उनले खासै ध्यान दिएका थिएन । जब डाक्टरले उनको आँखा परीक्षण गरे तब उनको दायाँ आँखाको नानीभित्र स साना किराहरुको गुँड नै रहेको पत्ता लाग्यो ।
बाहिर काम गर्दा आँखामा किरा पस्यो
आँखाबाट किरा निकालेका डाक्टरका अनुसार उनको आँखामा जुन किरा भेटिएको थियो,त्यहाँ त्यसका लार्भा पनि थिए । वेन नाम गरेका ती विरामी खेलकूदका सौखिन थिए । त्यसैले उनी बाहिर शारीरिक अभ्यासका लागि निस्कदा यी किरा उनको आँखामा प्रवेश गरेको डाक्टरको अनुमान छ । विस्तारै विरामीको अवस्था बिग्रदै गयो र नाजुक बन्दै गएपछि बल्ल उनी आँखा जाँच गराउन पूर्वी चीनमा अवस्थित सूभोयू नगरपालिका अस्पतालमा गएका थिए । ती विरामीले डाक्टर समक्ष एक वर्षदेखि आँखामा केही कुरा अड्किएको महसुस भएको बताएका थिए ।
आँखाको अपरेशन गरेका डाक्टर शी टिङका अनुसार विरामीलाई मौरी प्रजातिका किराले चिलाएको हुन सक्छ । त्यहीबाट यी किरा आँखासम्म पुगेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । यी किरा थेलेजिया केलीपेडा प्रजातिको रहेका छन् । यी किराहरुले आँखाको संक्रमण बढाउने काम गर्दछ ।
यी परजीवि किराहरु मुलतः कुकुर र बिरालोमा पाइन्छ । अपरेशन गरेर सबै किरा निकालेपछि विरामीले अहिले राहत महसुस गरेको समाचारमा उल्ल्ेख छ ।
ढोका थुनेर ग्यासमा २० लाख भारु किन जलाए यी दम्पतीले ?
एजेन्सी । भारतको राजस्थानका एक दम्पतीले घरभित्रै २० लाख भारु जलाएका छन् । सिरोही जिल्लाका